Latest Irrawaddy News!
127. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် တို့ ဘာလုပ်ကြမလဲ	-Irrawaddy
#Politics	(10h ago)
ဖြင့္ရန္။ တပ်မတော်ဟာ သီးခြားဌာန မဟုတ်ဘူး၊ နိုင်ငံရဲ့ ဥသျှောင် အောက်မှာရှိတဲ့ Institution တခုသာ ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီအတွက် NLD ပါတီ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်တို့ ဘာလုပ်ကြမလဲ။
126. Women Playing Larger Role at This Year’s Peace Conference	-Irrawaddy
125. LG ကုမ္ပဏီထံမှ OLED နဲ့ LCD iPhone Display ပေါင်း သန်း ၂၀ ကျော်ကို Apple မှာယူ	-Irrawaddy
#IT	(13h ago)
ဖြင့္ရန္။ LG ဆီက လောလောဆယ် Display ၃ သန်းလောက်ပဲ မှာထားတာကြောင့် ကျန်တဲ့ Display ပမာဏ အများစုကိုတော့ Samsung ကပဲ ဆက်ထုတ်ပေးရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
124. Router မူလ Password မပြောင်းလဲထားတာကြောင့် US ဒရုန်း စာရွက်စာတမ်းများ ခိုးယူခံရ	-Irrawaddy
#IT	(15h ago)
ဖြင့္ရန္။ လက်ရှိအချိန်မှာ အဆိုပါ အရေးကြီး စာရွက်စာတမ်းတွေကို Dark Web ပေါ်မှာ ရောင်းချထားပြီး၊ ဒေါ်လာ ၁၅၀ - ၂၀၀ လောက်ပဲ ဈေးခေါ်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
123. တောင်ကိုရီးယား ဒီမိုကရေစီ သူရဲကောင်းများ အကြောင်း ရိုက်ပြထားတဲ့ “1987”	-Irrawaddy
#Entertainment	(16h ago)
ဖြင့္ရန္။ ၁၉၈၇ ခုနှစ်တုန်းက တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တဲ့ စစ်အစိုးရ လက်အောက်မှာပါ။ နိုင်ငံကို သမ္မတ အနေနဲ့ အုပ်ချုပ်နေတဲ့သူက စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ချန်ဒူးဝမ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
122. iPad အတွက် Photoshop Full Version ထုတ်ပေးတော့မယ့် Adobe	-Irrawaddy
#IT	(17h ago)
ဖြင့္ရန္။ Adobe Creative Cloud ရဲ့ Product ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြီးအကဲဖြစ်သူ Scott Belsky ကလည်း Photoshop Cross-platform Edition လုပ်နေတယ် ဆိုတဲ့သတင်းကို အတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။
121. ဖားကန့်လုံခင်းတွင် မြေစာပုံပြိုကျ၊ လတ်တလော သေဆုံးသူ ၁၁ ဦးရှိ	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖာကန့်မြို့နယ်၊ လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စု ဆန်ခါးမှော်ရှိ “မဟာကျောက်မျက်ကုမ္ပဏီ”လုပ်ကွက် အတွင်း ယနေ့နေ့လည် ၂ နာရီခန့်က မြေစာပုံပြိုကျမှုဖြစ်ပွားရာ၊ လတ်တလော အမျိုးသမီး ၁ ဦးနှင့် အမျိုးသား ၁၀ ဦး၏ ရုပ်အလောင်းများကို တွေ့ရှိကြောင်း သိရသည်။
120. တောဝက် ဘောလုံးအသင်းကို ကယ်ဆယ်ခဲ့တဲ့ မယ်ဆိုင်ဂူတွင်း ခရီးကြမ်း	-Irrawaddy
#Lifestyle	(1d ago)
119. ချစ်သူနှစ်ဦးကြား အက်ကြောင်းထင်စေမယ့် အပြုအမူဆိုးများ	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ ကိုယ်သေချာ မသိဘဲ အပေါ်ယံ ပြောလိုက်မိတဲ့ စကားတွေကြောင့် ကိုယ့်ချစ်သူ စိတ်ထဲ အနာတရ ဖြစ်သွားတတ်သလို ဒီအပြုအမူတွေကို သတိမထားမိဘဲ နေ့စဉ် လုပ်မိနေပြီဆိုရင် သင်တို့နှစ်ယောက် ဆက်ဆံရေး ပြိုကွဲဖို့ကို ဦးတည်နေပါပြီ။
118. “မိန်းမ သိပ်မဆန်တဲ့ မိန်းကလေးမျိုးကို ကြိုက်တယ်” ဆိုတဲ့ မော်ဒယ် Tyron	-Irrawaddy
#Entertainment	(1d ago)
ဖြင့္ရန္။ “ကျနော်က မိန်းမ အရမ်းမဆန်တာမျိုးကို ကြိုက်တယ်။ အလုပ်ကြိုးစားပြီး ကျနော်ဘာလုပ်လုပ် နားလည်ပေးနေတဲ့ သူပေါ့နော်။ နောက်တယောက်ထားရင်တောင် နားလည်ပေးနေနိုင်တဲ့ သူမျိုးကို ကျနော်ကြိုက်တယ်။ ကျနော်က ချစ်တယ်။
117. ကင်မရာ ၄ လုံး၊ Kirin 970 SoC တို့နဲ့ ထွက်ရှိလာတဲ့ Huawei Nova3စမတ်ဖုန်း	-Irrawaddy
#IT	(1d ago)
ဖြင့္ရန္။ ရှေ့ကင်မရာ ၂ လုံးကတော့ 24-megapixel ၊ f/2.0 Sensor နဲ့ 2-megapixel secondary sensor တို့ဖြစ်ပြီး ရှေ့ကင်မရာကနေ Apple ရဲ့ Animoji နဲ့ ဆင်တူတဲ့ 3D Qmoji ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
116. ချိုဆိမ့်ဆိမ့် အရသာနဲ့ စားလို့ကောင်းတဲ့ သာကူပြင်	-Irrawaddy
#Food	(1d ago)
ဖြင့္ရန္။ ဒီတခါတော့ မြန်မာလူမျိုးတွေအကြိုက် မုန့်လုပ်နည်းလေးကို ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။ အလှူပွဲမှတင် မဟုတ်ဘဲ အိမ်မှာလည်း လုပ်စားလေ့ ရှိကြတဲ့ ချိုဆိမ့်ဆိမ့်အရသာ “သာကူပြင်”ပါ။ အုန်းနို့ ကြိုက်သူတွေက အုန်းနို့လေးရောပြီး လုပ်စားကြသလို သွေးတိုးသမားတွေနဲ့ လူကြီးတွေကတော့ ရိုးရိုး သာကူပြင်ပဲ လုပ်စားကြပါတယ်။ “သာကူပြင်”လုပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေက– – သာကူ – ထောပတ် – သကြား – ဆားအနည်းငယ် – ရေ နဲ့ – အုန်းသီးမှုန့် လိုအပ်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး သာကူကို သေချာသန့်စင်ပြီး စစ်ထားပါ။ ရေထည့်ထားတဲ့ အိုးထဲကို သကြား၊ ဆားအနည်းထည့်ပြီး ဆူလာရင် သာကူထည့်ပါ။ သာကူစေ့တွေ အစေ့ပျောက်တဲ့အထိ မွှေပေးပါ။ အစေ့ပျောက်သွားလို့ ပျစ်ပျစ်လေးဖြစ် လာပြီဆိုရင် ထောပတ်သုတ်ထားတဲ့ ဗန်းထဲလောင်းထဲပြီး […]
115. ကျိုက်မရော အာဇာနည် ပန်းခြံရှိ စက်သုံးဆီဆိုင်၂၀၁၉ ၌ ပြောင်းရွှေ့ပေးမည်ဟု ဆို	-Irrawaddy
#စီးပွားရေး	(1d ago)
ဖြင့္ရန္။ မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်မရောမြို့နယ် ရန်မျိုးအောင် ရပ်ကွက်ရှိ အာဇာနည် ကျောက်တိုင် ပန်းခြံဝင်းအတွင်းမှ ရာဇာမင်း စက်သုံးဆီ အရောင်းဆိုင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိမှုကို၂၀၁၉ ခုနှစ် အာဇာနည်နေ့ မတိုင်ခင် ဖယ်ရှားပေးသွားမည် ဟု
114. “တက္ကသိုလ် ကျောင်းတုန်းက ကောင်လေးတွေကို ပညာပေးတာမျိုး မရှိပါဘူး” ဆိုတဲ့ အိချောပို	-Irrawaddy
#Entertainment	(2d ago)
ဖြင့္ရန္။ “အိချော အရမ်းကို စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်။ ဒီကားကလည်း အရင်တုန်းက အရမ်းကောင်းထားတဲ့ ကားလေးကို ပြန်ရိုက်ထားတာဆိုတော့ အိချောအနေနဲ့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားထားပါတယ်။
113. အထီးကျန်ခြင်းဟာ ဆေးလိပ် သောက်ခြင်းထက် ကျန်းမာရေးကို ပိုမိုထိခိုက်စေနိုင်	-Irrawaddy
#Health	(2d ago)
ဖြင့္ရန္။ အမေရိကန်နိုင်ငံ စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ သုတေသပြုချက်တွေအရ အထီးကျန်ခြင်း ဝေဒနာကို အများဆုံး ခံစားရတတ်တဲ့ အသက်အရွယ် အပိုင်းအခြားတွေဟာ ၄၅ နှစ်နဲ့ အထက် ဝန်းကျင် လူတွေလို့ ဆိုပါတယ်။
112. China Does Not Have Special Interests in Supporting Myanmar’s Peace Process: Official	-Irrawaddy
111. Tatmadaw Invites Ta’ang, Kokang and Arakan Armies to Participate in Ceasefire	-Irrawaddy
110. နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ သရုပ်ဆောင် မေထွဋ်ခေါင်ရဲ့အိမ် ဖောက်ထွင်းခံရ	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ “အမှု မဖွင့်ဖြစ်တာက အရင်က ကျမအိမ်က အိမ်ဖော်ကောင်မလေး ပိုက်ဆံ ၇ သိန်းခိုးပြီး ထွက်ပြေးသွားလို့ အမှု သွားဖွင့်တယ်။ ဘာမှမလုပ်ပေးကြဘူး။ အခုလည်း ဖွင့်ရင် သိပ်ထူးမယ် မထင်လို့ မဖွင့်တော့တာပါ။
109. Naga Youth Oppose Aung San Statue in Sagaing	-Irrawaddy
108. 12 Tatmadaw Troops, 1 RCSS Soldier Killed in4Days of Fighting in Mong Kung	-Irrawaddy
107. Second Wa Delegate Hospitalized in Naypyitaw Amid Peace Talks	-Irrawaddy
106. ဝတ္ထုကိုဖတ်ပြီး သဘောကျလို့ “ကြွေ” ဇာတ်ကားကို ရိုက်ဖြစ်တာဆိုတဲ့ လွှမ်းပိုင်	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ “ဇာတ်ကားရိုက်ရတာ သီချင်းဆိုလိုက်တာနဲ့ မတူဘူးလေ။ ကျနော်က ပေါ့ပေါ့လေး သရုပ်ဆောင်လိုက်ရင် ကြည့်တဲ့ ပရိသတ်တွေ ပေါ့ပေါ့ကြီး ကြည့်ရမှာလေ။
105. UWSA ခေါင်းဆောင် ၁ ဦး ထပ်မံ မူးလဲ၍ ဆေးကုသမှု ခံယူနေရ	-Irrawaddy
#Ethnic Issues	(2d ago)
ဖြင့္ရန္။ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံသို့ အထူးဧည့်သည် အဖြစ် တက်ရောက်လာသည့် “ဝ” ပြည်သွေးစည်း ညီညွှတ်ရေး တပ်မတော် (UWSA) ခေါင်းဆောင် ၁ ဦး ထပ်မံ၍ မူးလဲသဖြင့် နေပြည်တော် ခုတင် (၁၀၀၀) ဆေးရုံ၌ ဆေးကုသမှု ခံယူနေကြောင်း
104. သားအပေါ် ဂရုစိုက်မှု လွန်ကဲတဲ့ မိခင်အဖြစ် Kajol ကို မြင်တွေ့ရမယ့် “Helicopter Eela”	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ သားဖြစ်သူကလည်း အသက်ငယ်ရွယ်ပေမယ့် မိခင်ဖြစ်သူ သူ့ဘေးနားမှာရှိနေတာကို မကြိုက်နှစ်သက်သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဂရုစိုက်မှု လွန်ကဲတဲ့ မိခင်ဖြစ်သူက သားနဲ့အတူ ကျောင်းတက်ဖို့ ပြင်ဆင်လာတဲ့အခါမှာတော့ ဒီဇာတ်လမ်းလေး ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
103. မသိစိတ်အတွင်းက စိတ်ဒဏ်ရာတွေကို လှစ်ဟပြထားတဲ့ သုညစိတ္တဇ (Psycho Zero)	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ ဇာတ်ကားတိုင်းရဲ့ Sound system ပိုင်းမှာလည်း သဘာဝကျတဲ့ သဘာဝအသံတွေကိုပဲ ထည့်သွင်း ထားတာကြောင့် ပုံစံအသစ်၊ အရသာ အသစ်တခုကို ခံစားမိစေပါတယ်။
102. ကျမတို့ ကမ္ဘာ့ဖလားအနိုင်ရမယ် ဟု ခရိုအေးရှားသမ္မတ ပြောကြား	-Irrawaddy
#သတင်း	(2d ago)
ဖြင့္ရန္။ “ဒီဘောလုံးပွဲနိုင်ရင် ကျမတို့ ညစာစားပွဲနဲ့ တည်ခင်းပါ့မယ်” ဟု ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ၊ ဘရပ်ဆဲလ်မြို့တွင် ကြာသပတေး နေ့က ကျင်းပသည့်နေတိုးထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ၏ နောက်ဆုံး အစည်းအဝေးခန်းမအတွင်းသို့ အဝင်တွင် ဂရေဘာကီ တရိုဗစ် က ပြောကြားခဲ့သည်။
101. “Skyscraper” မှာ ခုန်ချတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းကို တကြိမ်တည်း အပြီးရိုက်ခဲ့တဲ့ Dwayne Johnson	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ ရင်သပ်ရှုမောရတဲ့ အဲဒီဇာတ်ဝင်ခန်းဟာဆိုရင် ရုပ်ရှင်ရဲ့ အမြည်းဗီဒီယိုထဲမှာ ပါဝင်ပြီး အခုတော့ နပန်းသမားဟောင်း မင်းသားက လေထဲမှာ ပေ ၄၀ လောက် တကယ်ခုန်ချခဲ့ရတဲ့အကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
100. ရုပ်ရှင် ပရိုမိုးရှင်းအတွက် ထိုင်ဝမ်ကို သွားမယ့် “Along With the Gods 2” အနုပညာရှင်များ	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ Along With the Gods: The Last 49 Days ရုပ်ရှင်ကို ထိုင်ဝမ်မှာ သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့စကလို့ ရုံတင်ပြသမှာ ဖြစ်ပြီး တောင်ကိုရီးယားမှာတော့ သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့က စလို့ ပြသမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
99. “ခန္ဓာကိုယ် ဝနေပေမယ့် ကြိုက်တယ်” လို့ဆိုတဲ့ ရွှေသမီး	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ မိန်းကလေးဆိုတော့ ဝလာတဲ့ နဲ့ ဗိုက်မှာ အဆီတွေ စုနေတယ်။ အဲ့တော့ ဗိုက်ကလေးကို နည်းနည်း လေ့ကျင့်ခန်းလေး လုပ်နေပါတယ်”လို့ ရွှေသမီးက ပြောပါတယ်။
98. “အနုပညာတခုကို လုပ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ဇာတ်ကားတွေ ပြန်ရိုက်ဖြစ်တယ်” ဆိုတဲ့ လှမျိုးသဉ္ဇာနွယ်	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ လှမျိုးသဉ္ဇာနွယ်က လတ်တလောမှာလည်း “ဟစ်တိုင်” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကြီး ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေပြီး ကိုယ်ပိုင်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး နဲ့လည်း မောင်ဖြစ်သူကို ဇာတ်ကားများ ထုတ်လုပ်ရိုက်ကူး ပေးလျက်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
97. Emmys ဆု ၂၂ ခုအထိ လျာထားခံရတဲ့ “Game of Thrones” ဇာတ်လမ်းတွဲ	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ အဲဒီဇာတ်လမ်းတွဲဟာ ဆု ၂၁ ခုစီလျာထားခံထားရတဲ့ ဟာသအစီအစဉ် Saturday Night Live နဲ့ HBO ရဲ့ Westworld ဇာတ်လမ်းတွဲတို့နဲ့အပြိုင် ပြင်းထန်တဲ့ စိန်ခေါ်မှုကို ရင်ဆိုင်ရမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
96. ဘောလိဝုဒ် ရုပ်ရှင်လောကကို တဆင့်မြှင့်တင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ “Gangs Of Wasseypur” ရုပ်ရှင်	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ ဒီဇာတ်ကားဟာ ဘောလိဝုဒ်ရဲ့ Godfather ရုပ်ရှင်လို့တောင် ပြောလို့ရပြီး Over Action တွေနဲ့ Long Coat ကြီး ဝတ်၊ တက်တူးတွေထိုးထားတဲ့ ပေါပေါပဲပဲ ဂိုဏ်းစတားကားတကား မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ အသေအချာ ပြောရဲပါတယ်။
95. တယောက်တည်း နေတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားရင် လုပ်သင့်တဲ့ အချက် ၇ ချက်	-Irrawaddy
#Lifestyle	(2d ago)
ဖြင့္ရန္။ ပြန်တွေးလိုက်တိုင်း စိတ်ကျေနပ်နေစေရမယ့် အမှတ်တရတွေအတွက် အတွေ့အကြုံအသစ်တွေ ရှာပါ။ တယောက်တည်း ခရီးထွက်တာမျိုး၊ ပရဟိတလုပ်တာမျိုး သင်တခါမှ မလုပ်ဖူးခဲ့တဲ့ အရာတွေကို စတင်လုပ်ဆောင်ပါ။
94. မတ္တရာမြို့နယ်တွင် ၇ နှစ်အရွယ်ကလေးကို အဓမ္မပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွား	-Irrawaddy
#Crime	(2d ago)
ဖြင့္ရန္။ မုဒိမ်းမှုဖြစ်စဉ်ကို မတ္တရာမြို့မရဲစခန်းတွင် အမှုကြီးအမှတ်စဉ် (၄/၂၀၁၈) (ပ)၃၉၀/၂၀၁၈ ရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၇၆ ဖြင့် တရားခံဖြစ်သူ သက်နိုင်ဦးအား ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေကြောင်း သိရသည်။
93. ဇူလိုင် ၁၉ ရက်နေ့မှာ ထွက်ရှိလာမယ့် Xiaomi Mi Max3စမတ်ဖုန်း	-Irrawaddy
#IT	(2d ago)
ဖြင့္ရန္။ အသစ် ထွက်ရှိလာမယ့် Xiaomi Mi Max3ဈေးနှုန်းကတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅၀ ဒေါ်လာလောက် ဖြစ်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။
92. MacBook Pro Touch Bar မော်ဒယ်တွေကို Upgrade လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ Apple	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ အခု MacBook Pro Update မော်ဒယ်အသစ်တွေမှာမှ ပါဝင်လာတဲ့ T2 Chip ကြောင့် အရင်လို Siri ကို Shortcut နဲ့ပဲ ခေါ်စရာ မလိုတော့ဘဲ Hey Siri ဆိုပြီး အသံနဲ့ ခေါ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
91. ANP’s Criticism of Government in Peace Conference Speech Sparks Controversy	-Irrawaddy
#Burma	(3d ago)
ဖြင့္ရန္။ UPDJC bloc disavows comments, which upset Daw Aung San Suu Kyi; Rakhine politicians say major parties have never been asked to self-censor
90. UWSA ဒု ဥက္ကဋ္ဌ ပေါက်ယူရိ ၏ ကျန်းမာရေး အထူးဂရုစိုက်ထားဟု အစိုးရပြော	-Irrawaddy
#Ethnic Issues	(3d ago)
ဖြင့္ရန္။ နှလုံးရောဂါ ကုသဆောင်မှာ ကုသနေတယ်။ အခု ကျနော့်ဆီက ဒေါက်တာ တင်မျိုးဝင်းလည်း အတိုင်ပင်ခံနဲ့ ၇ ဖွဲ့ တွေ့ပြီးတာနဲ့ အခုဆေးရုံ သွားနေပြီ။ PC ကလည်း သွားနေပြီ။ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီး ဌာနကိုလည်း ပြောထားတယ်
89. Military Chief’s Comment on Tatmadaw ‘Representing’ the People Draws Backlash Online	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ Critics post ‘Tatmadaw doesn’t represent me’ on social media in riposte to senior general’s speech to Union Peace Conference.
88. “ကျနော်နဲ့ ပြောဆိုလို့ အဆင်ပြေတဲ့သူတွေနဲ့ပဲ အလုပ်တွဲလုပ်နေတယ်” ဆိုတဲ့ အောင်မြင့်မြတ်	-Irrawaddy
#Entertainment	(3d ago)
ဖြင့္ရန္။ “ဇာတ်ကောင်ကိုတော့ ကျနေ်ာနဲ့ အဆင်ပြေမယ်။ ပြီးတော့ ကျနော်လုပ်ချင်တဲ့ ပုံစံနဲ့တူမယ်ဆိုရင် လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆင်မပြေတာတွေ ပါတယ်။ ကျနော်လုပ်ချင်တာနဲ့ မတူတာတွေ ရှိတယ်။ အဲ့ခါကျရင် မလုပ်ဖြစ်ဘူး”
87. Wa Delegate Faints Before Meeting With State Counselor, Rushed to Hospital	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ A UWSA spokesman said Bao Yu Yi, the armed group\_'s vice chairman, fainted from heat stroke but was recovering.
86. “ဇာတိမြေ ဇာတ်ကားက အပင်ပန်းခံပြီး ရိုက်ခဲ့ရတဲ့ကားပါ” လို့ ဆိုတဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ “ဇာတ်လမ်းလေးကလည်း ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးဖြစ်တော့ ပရိသတ်တွေလည်း ကြိုက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ပင်ပန်းခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ပျော်ပါတယ်။
85. UWSA ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးပေါက်ယူရိ မူးလဲ	-Irrawaddy
#Politics	(3d ago)
ဖြင့္ရန္။ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ- ၂၁ရာစုပင်လုံ တတိယအစည်းအဝေး သို့ တက်ရောက်လာသည့် မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးလည်းဖြစ် ဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော် ( UWSA) ၏ ဒုဥက္ကဌ ဦးပေါက်ယူရိ ယနေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင် မူးလဲပြီး နေပြည်တော် ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှု ခံယူနေရသည်ဟု သတင်းရရှိသည် ။
84. နေ့လည်ခင်းမှာ တမှေးအိပ်စက်ခြင်းကနေ ရရှိနိုင်မယ့် ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးများ	-Irrawaddy
#Health	(3d ago)
ဖြင့္ရန္။ နေ့လည်ဘက်မှာ တမှေးအိပ်စက်ခြင်းဟာ ကော်ဖီသောက်တဲ့အခါ ကော်ဖီမှာပါဝင်တဲ့ ကဖင်းဓာတ်ကြောင့် လန်းဆန်းသွားတာထက် ပိုမိုကောင်းမွန်တယ်လို့ အိပ်စက်မှုဆိုင်ရာ သိပ္ပံပညာရှင် Sara Madnick ကဆိုပါတယ်။
83. Mercedes-Benz နဲ့ Bosch တို့ ပူးပေါင်းကာ မောင်းသူမဲ့ တက္ကစီများ ထုတ်လုပ်မည်	-Irrawaddy
#Automobile	(3d ago)
ဖြင့္ရန္။ မောင်းသူမဲ့စနစ်ကို ပထမဆုံး အသုံးပြုမယ့် ကားတွေ ကတော့ Mercedes ရဲ့ S-Class Sedans ကားတွေနဲ့ V-Class Vans ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
82. တောင်ကိုရီးယား မူလတန်းကျောင်းတွေမှာ သီဆိုဖို့ တားမြစ်ခံထားရတဲ့ Kpop သီချင်း	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ နာမည်ကျော်အမျိုးသား အဆိုတော်အဖွဲ့ရဲ့လူကြိုက်များတဲ့ သီချင်း တပုဒ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ တေးသံစဉ်ကြောင့် ကလေးငယ်တွေတောင် ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
81. Advocacy Groups Seek Gender Equality Policy	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ Women’s advocacy groups urged delegates attending the Panglong Peace Conference this week to push foragender equality policy regarding women’s representations across all sectors.
80. Noted Myanmar Environmentalist Dies	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ U Ohn,adevoted environmentalist, died on Wednesday of natural causes at the age of 91 at his residence in Yangon’s Mayangone Township.
79. “သီချင်းသီဆိုမှု အတွေ့အကြုံသစ်အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့” R ဇာနည်	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ ကျနော်က သီချင်းတွေကို ကိုဓိရာမိုရ်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီးရွေးတာပါ။ သေချာတဲ့ တပုဒ်လောက်တော့ ပြောပြမယ်။ အဲဒါက ကျနော့်ရဲ့ “ကမ္ဘာသား” သီချင်းပေါ့။
78. Detox ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်နေကြောင်း သိနိုင်သော လက္ခဏာများ	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် အလုပ်မအားလပ်တာနဲ့ ချက်ပြုတ်ဖို့ အချိန်မပေးနိုင်တာကြောင့် အပြင်စာနဲ့ အသင့်စား အစားအစာတွေကို စားသုံးမှုများလာကြပါတယ်။
77. အမေရိကရဲ့ အသက်အငယ်ဆုံး ဘီလီယံနာ ဖြစ်လာတဲ့ Kylie Jenner	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ Kylie ဟာ အိုလံပစ်ရွှေတံဆိပ်ဆုရှင် ဟောင်း Bruce Jenner နဲ့ Kris Jenner တို့ရဲ့ အငယ်ဆုံးသမီးဖြစ်ပါတယ်။
76. စေ့စပ်လိုက်ပေမယ့် ချစ်သူဟောင်းပုံ တက်တူးကို မဖျက်သေးတဲ့ Justin Bieber	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ Bieber ဟာ အဲဒီတက်တူးကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်က ထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
75. “သားလေး	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ “ကလေးက နောက်လမှာတော့ ရတော့မှာပေါ့။ ခုလောလောဆယ် သားလေးရတော့မှာမလို့ လင်မယား နှစ်ယောက်စလုံး တော်တော် ပျော်နေပါတယ်။ ဖခင်တယောက် ဖြစ်လာတော့မှာဆိုတော့ ကြည်နူးနေတယ်။
74. အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေ မွေးမြူတော့မယ်ဆိုရင် ကြိုတင်စဉ်းစားသင့်တဲ့ အချက် ၅ ချက်	-Irrawaddy
#Lifestyle	(3d ago)
ဖြင့္ရန္။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေ မွေးမြူတော့မယ်ဆိုရင် သူတို့တွေကို အချိန်ပေးဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ အချိန်ပြည့် အချိန်ပေးတာမျိုး မဟုတ်ရင်တောင် အားလပ်တဲ့ အချိန်တွေမှာ ယုယုယယ နေပေးသင့်ပါတယ်။
73. ဆေးကျောင်းမပြီးခင် အချိန်အတွင်း ဝါသနာပါတဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေ လုပ်မယ့် ပိုးမမှီသာ	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ “အခုတော့ ညီမက Final Part 2ဆိုတော့ အရေးကြီးတဲ့အချိန်ကို ရောက်လာပါပြီ။ အခုလို အနုပညာ လုပ်လာတဲ့အတွက် ကျောင်းဘက်မှာ နည်းနည်းလစ်ဟင်းတာတွ ရှိပါတယ်။
72. ပေါင်မြို့နယ်တွင် ပိတောက်ခွဲသားသစ် တန် ၆၀ ဖမ်းမိ	-Irrawaddy
#Crime	(3d ago)
ဖြင့္ရန္။ ခန့်မှန်းခြေက ဒါ ပြည်ပကိုထွက်မယ်သစ်လို့ပဲ ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပိတောက်သစ်တွေက မွန်ပြည်နယ်မှာ တော်တော်များများ မသုံးကြပါဘူး၊ အဓိက မလေးရှားပေါ့”
71. အားလုံး မထင်မှတ်ထားတဲ့ “Android P” နာမည်က ဘာဖြစ်မလဲ	-Irrawaddy
#IT	(3d ago)
ဖြင့္ရန္။ တချို့ကတော့ P ဆိုတာ “Pancake” လို့ ခန့်မှန်းထားကြပြီး၊ တချို့ကတော့ “Android Popsicle” (ရေခဲချောင်း) လို့ ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။
70. U.S. Slaps Sanctions on2Ministries Over Failure to Accept Deportees	-Irrawaddy
#Burma	(4d ago)
ဖြင့္ရန္။ Senior officials from Labor, Home Affairs ministries to be denied visas
69. Musician, Peace Activist Ko Ye Lwin Dies	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ The songwriter, bassist and peace charity group founder died of liver cancer on Tuesday. He was 71.
68. Karenni Youth Activists Sued Over Aung San Statue Protest	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ The 16 are being sued under the Peaceful Assembly Law on charges that could land them in jail for up toayear. Eleven of them have already been sued for incitement.
67. ဦးရဲလွင်နဲ့ ဒွေးတို့အတွက် ဝမ်းနည်းနေတဲ့ အဆိုတော် ကော်နီ	-Irrawaddy
#Entertainment	(4d ago)
ဖြင့္ရန္။ “ကိုသားကြီးကိုလည်း သတိရပါတယ်။ မနက်ကတည်းက အစ်ကို (ကိုသားကြီး) ပုံတွေတက်လာလိုက်၊ ဦးရဲပုံတွေ တက်လာလိုက်နဲ့ စိတ်ထဲ မကောင်းဘူး။
66. Hundreds of Shan Villagers Flee Mong Kung as Tatmadaw Assaults RCSS Positions	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ Some 451 IDPs sheltering ataBuddhist monastery as fighting enters third day.
65. Nationalist Sympathizer Arrested with Grenade in Rakhine	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ Police say they found the grenade in the home of Tun Myint Oo, who refused to leaveavillage he helped resettle with non-Muslims after it was cleared of Rohingya last year.
64. iPhone X နဲ့ iPhone SE ထုတ်လုပ်မှုကို ရပ်ဆိုင်းပစ်ဖွယ်ရှိတဲ့ Apple	-Irrawaddy
#IT	(4d ago)
ဖြင့္ရန္။ Apple အနေနဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်းမှာတင် 2018 iPhones မော်ဒယ်အသစ် အလုံးရေ စုစုပေါင်း ၉၁ သန်းအထိ ထုတ်ဖို့ လျာထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
63. သမီးအရင်းကို အဓမ္မပြုကျင့်သည့်ဖခင်အား ဖမ်းဆီး	-Irrawaddy
#Crime	(4d ago)
ဖြင့္ရန္။ အသက် ၁၁ နှစ်မှ ၁၃ နှစ်အတွင်းဖြစ်ပွားသည့် မုဒိမ်းမှုပေါင်း ၂၂၁ မှု ရှိကြောင်း၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးသည် သက်ငယ်မုဒိမ်းဖြစ်ပွားမှုနှုန်း တတိယအများဆုံးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
62. အိမ်အကူမကရင်မအမှု တရားလိုအား စတင်စစ်ဆေး	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ မကရင်မသေဆုံးမှုတွင် တရားခံဟုယူဆရသူ တပ်မတော်အရာရှိကတော် ဒေါ်သိင်္ဂီစုကို လူသတ်မှု ပုဒ်မ ၃၀၂ ဖြင့် တရားစွဲဆို ဖမ်းဆီးထားခြင်း ဖြစ်သည်။
61. ထိုင်းက ကလေး ၁၃ ယောက်နဲ့ ကယ်ဆယ်သူတွေကို တွေ့ဆုံဖို့ Manchester United ဖိတ်ခေါ်	-Irrawaddy
#Lifestyle	(4d ago)
ဖြင့္ရန္။ အမေရိကန် သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့် ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကလေးတွေလွတ်မြောက်လာမှုအတွက် ဝမ်းသာကြောင်း တွစ်တာမှာ အခုလို ရေးသားထားပါသေးတယ်။
60. မြန်မာ ဝန်ကြီးဌာန ၂ ခု ကို အမေရိကန် ဗီဇာ မပေးတော့	-Irrawaddy
#Politics	(4d ago)
ဖြင့္ရန္။ မြန်မာသာမက လာအိုနိုင်ငံကိုလည်း အမေရိကန်က အလားတူ ဒဏ်ခတ်ခဲ့သည်။
59. ရာဇဝင်ထဲက “Chanakya ဂုရုကြီး” အဖြစ် မင်းသား Ajay Devgn သရုပ်ဆောင်မည်	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ အဲဒီရုပ်ရှင်ဟာ အကြီးကျယ်ဆုံးနိုင်ငံရေး အတွေးအခေါ်ပညာရှင်၊ ဒဿနပညာရှင်၊ ဘောဂဗေဒပညာရှင်နဲ့ တော်ဝင်အကြံပေး Chanakya ရဲ့ ပို့ချမှုတွေနဲ့ ဘဝအကြောင်းအခြေခံ ရိုက်ကူးမှာဖြစ်ပါတယ်။
58. အိပ်ရေးဝပေမယ့် အိပ်ရာကနိုးတဲ့အခါ လေးလံထိုင်းမှိုင်းနေရတဲ့ အကြောင်းရင်း ၅ ချက်	-Irrawaddy
#Health	(4d ago)
ဖြင့္ရန္။ အိပ်ရာကနိုးတာနဲ့ ခေါင်းတွေကိုက်ခဲပြီး စိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်နေတာဟာ ညဘက်အိပ်စက်ချိန်တွေမှာ သွားကြိတ် တတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်ကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
57. ဘဝမှာ အမှတ်တရ တခုဖြစ်အောင် ရုပ်ရှင်ရိုက်မယ့် မိတ်ကပ် လင်းလင်း	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ “Transgender (လိင်ပြောင်းလဲထားသူ) တွေက ရယ်စရာကောင်းတဲ့သူတွေအဖြစ် မမြင်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် လင်းတို့သည် သူများ သားပျို၊ သမီးပျိုကို မစော်ကားဘူး။ သူများပစ္စည်းလည်း မခိုးသလို လိမ်လည်း မစားဘူး။
56. တောင်ကိုရီးယားမှာ	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ ဇာတ်ကားရဲ့ ပထမဆုံးအပိုင်း နှစ်ပိုင်းဟာလည်း လူကြည့်နှုန်းနေရာမှာ tvN ရုပ်သံလိုင်းရဲ့ စံချိန်တင်ဇာတ်လမ်းတွဲ Guardian” ကို ကျော်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။
55. Mon State Resources Ministry Warns Antimony Plants to Control Fumes	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ The Mon State natural resources ministry has warned local antimony plants to control their fumes or risk action taken against them.
54. ပစ္စည်းတွေကို အစမ်း ဝတ်ကြည့်နိုင်တဲ့ Augmented Reality Ads တွေကို Facebook စတင်စမ်းသပ်	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ လောလောဆယ်တော့ Facebook နဲ့ လက်တွဲထားတဲ့ ကြော်ငြာရှင် တချို့မှာပဲ ဒီ AR (Augmented Reality) Ads တွေကို စမ်းသုံးနိုင်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
53. ၃၉၉ ဒေါ်လာတန် Surface Go တက်ဘလက်အသစ်ကို Microsoft မိတ်ဆက်	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ ၇၉၉ ဒေါ်လာတန် Surface Pro နဲ့ ယှဉ်မယ် ဆိုရင်တော့ တဝက်လောက်အထိ သက်သာတဲ့ Surface Go က စာလုပ်ဖို့နဲ့ ရုံးအလုပ် အနည်းငယ်လုပ်ဖို့လောက်ပဲ သုံးမယ့်လူတွေအတွက် သင့်တော်မှာပါ။
52. အသက် ၉ နှစ်အရွယ်မှာ သေဆုံးသွားတဲ့ ကမ္ဘာ့ရုပ်အဆိုးဆုံးခွေးလေး Zsa Zsa	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ ခွေးလေး Zsa Zsa ရဲ့ ပိုင်ရှင် Megan Brainard ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လ ၉ ရက်နေ့ညမှာပဲ သူဟာ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ Today မီဒီယာကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
51. အီတလီနိုင်ငံမှာ မတော်တဆမှုကြောင့် ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့တဲ့ မင်းသား George Clooney	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ မင်းသားရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ကတော့ “George ဟာ Olbia ဆေးရုံတခုမှာ ကုသမှု ခံယူခဲ့ပြီး ပြန်ဆင်းလာခဲ့ပါပြီ။ သူဟာ အိမ်မှာ ပြန်လည် သက်သာလာနေပြီး ကောင်းသွားမှာပါ” လို့ ET မီဒီယာကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
50. မြွေကို အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ် မွေးမြူလာကြတဲ့အကြောင်း	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ မြွေကို အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ် မွေးမြူသူတွေကို သုတေသနလုပ်ကြည့်တဲ့အခါ မြွေမွေးခြင်းဟာ အလှမွေးငါး မွေးမြူသလိုပဲ မှန်ဘောင်ထဲမှာ အလှကြည့်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
49. ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှာ တခါသုံး ပလတ်စတစ်ပိုက်တွေ သုံးစွဲမှု ရပ်ဆိုင်းတော့မယ့် Starbucks	-Irrawaddy
#Environment	(4d ago)
ဖြင့္ရန္။ တခါသုံး ပလတ်စတစ်ပိုက် နေရာမှာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှု မရှိတဲ့ တခြားပစ္စည်းတွေနဲ့ အစားထိုးသွားမှာပါ။ “Starbucks က တခါသုံး ပလတ်စတစ်ပိုက် မလိုတဲ့ အဖုံးပါတဲ့ ဘူးတွေကို ဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီးသားပါ။
48. ခနောက်စိမ်းစက်ရုံများ	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ သိုလှောင်ပုံထားရာတွင် အမိုးအကာလုံသော နေရာများ၌ မထားရှိခြင်းကြောင့် မိုးရွာချိန်များတွင် ခနောက်စိမ်းနှင့် ကျောက်မီးသွေး အမှုန်များပါသည့် ရေများသည် လယ်ကွက်များဘေးသို့ ဆင်းလာကြကြောင်း
47. Wild Boars Coach ‘Ake’ and Resourceful Young Team Member Emerge as Heroes of Thai Cave Saga	-Irrawaddy
#Burma	(5d ago)
ဖြင့္ရန္။ Coach credited with group’s survival and boy who spoke to divers both have ties to Myanmar
46. Myanmar’s Foreign Debt — The Big Picture	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ Check out these Infographics to see where the country’s more than $9.1 billion in borrowing comes from — and where the money goes.
45. ကလေး ၁၃ ယောက်ကို ကယ်ဆယ်ခဲ့တဲ့ သူရဲကောင်း Saman Gunan	-Irrawaddy
#Lifestyle	(5d ago)
ဖြင့္ရန္။ သူနဲ့အတူ ပါလာတဲ့ အဖော်က CPR ပေးဖို့ကြိုးစားပေမယ့် Saman ရဲ့အသက်ကို မမှီခဲ့ပါဘူး။ သူ့ရဲ့အနစ်နာခံ ကယ်ဆယ်ခဲ့မှုတွေအတွက် ကျန်ရစ်သူမိသားစုအပေါ်လည်း အားနာ သနားမှုတွေကို လူအများ ခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
44. မယ်ဆိုင်ဂူအတွင်းမှ ကယ်ထုတ်ထားတဲ့ ကလေးတွေရဲ့ လတ်တလော အခြေအနေ	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ လတ်တလောမှာတော့ ကောင်လေး ၄ ယောက်နဲ့ လက်ထောက်နည်းပြသာ ဂူထဲမှာ ကျန်ရှိနေတော့တာဖြစ်ပြီး သူတို့နဲ့အတူ ရေတပ်စစ်သားတွေနဲ့ ဆရာဝန်တယောက်တို့ ရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
43. ကမ္ဘာပေါ်က အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးနေရာ ၅ ခု	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ Abraham Lake လို့ သိကြပြီး ကနေဒါမှာ ရှိပါတယ်။ ပူစီဖောင်းလေးတွေဟာ ပျောက်ကွယ် မသွားဘဲ အေးခဲနေတာကို အံ့အားသင့်ဖွယ်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
42. ပိတ်မိနေတဲ့	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ “သူအပြင်ကို ပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ သူ့ကို ကျမတို့ကုသပေးမယ်၊ သူ့ကိုအပြစ်တင်ဖို့ စိတ်ကူးတောင် မရှိဘူး” လို့ ကလေးမိဘတဦးက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
41. Ethnic Armed Leaders to Meet State Counselor, Army Chief in Hope of Peace Process Breakthrough	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ Key leaders of seven ethnic armed groups based along Myanmar’s northern border will meet State Counselor Daw Aung San Suu Kyi and Myanmar Army Chief Snr-Gen Min Aung Hlaing.
40. 50 Dead in Accidents on Yangon-Mandalay Hwy in First Half of 2018	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ Traffic police said another 490 people were injured over the same period along what some have dubbed Myanmar\_'s death highway.
39. “အသက် ၁၅နှစ်သမီးထဲက မင်းသမီးစလုပ်ခဲ့တာပါ” ဆိုတဲ့ ခင်ဇာခြည်ကျော်	-Irrawaddy
#Entertainment	(5d ago)
ဖြင့္ရန္။ “၂၀၁၈ခုနှစ်ကတော့ ကျမအတွက် အကောင်းအဆိုးတွေ ဒွန်တွဲနေတယ်။ ကျမ ကံကောင်းတယ်ဆိုရမှာပေါ့ ကျမပါဝင်ခဲ့တဲ့ “ဥပါဒါန်” ရုပ်ရှင်ကားကြီး ပေါက်တယ်။ အခု “ရာဇဝင်ရိုင်းခဲ့သည်” နာမည်ကြီးနေတယ်။
38. Vivo ရဲ့ Nex ဖုန်းကို တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပမှာ စတင်ရောင်းချသွားမည်	-Irrawaddy
#IT	(5d ago)
ဖြင့္ရန္။ တရုတ်နိုင်ငံမှာ Vivo Nex S စမတ်ဖုန်းကို Storage မော်ဒယ် ၂ မျိုးအတွက် တရုတ်ယွမ်ငွေ ၄၄၉၈ ( ဒေါ်လာ ၇၀၀ ခန့်) နဲ့ တရုတ်ယွမ်ငွေ ၄၉၉၈ (ဒေါ်လာ ၇၈၀ ခန့်) နဲ့ လက်ရှိရောင်းချလျက်ရှိပါတယ်။
37. Asphalt 9: Legends ဂိမ်းကို Google Play Store မှာ ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပြီ	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ အခုလို Play Store မှာ တကမ္ဘာလုံးကနေ Pre-Register ပြုလုပ်နိုင်ပြီဆိုတာကိုကြည့်ရင် မကြာခင်အချိန်အတွင်း နိုင်ငံအားလုံးမှာ တရားဝင်ထွက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
36. “Wonder Woman” ဝတ်စုံဝတ်ပြီး ကလေးဆေးရုံကို သွားရောက်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီး Gal Gadot	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ ဓာတ်ပုံထဲမှာတော့ ဆံပင်မရှိတော့တဲ့ ကလေးငယ်ဟာ သူ့ရဲ့ကုတင်ပေါ်မှာ ပြုံးနေပြီး Wonder Woman မင်းသမီးက သူ့ရဲ့ အရှေ့မှာ ရပ်နေခဲ့ပါတယ်။
35. Justin Bieber က Hailey Baldwin ပေးတဲ့ ဒေါ်လာ ၂ သန်းတန် စေ့စပ်လက်စွပ်	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်မှာ မော်ဒယ် Hailey တင်ခဲ့တဲ့ Twitter က ပို့စ်တခုမှာ တော့ “တကယ်လို့များ ကျမရဲ့ လက်စွပ် ဟာ Blake Lively ရဲ့ လက်စွပ်လောက် မကြီးဘူးဆိုရင် ကျမ လက်ထပ်မှာမဟုတ်ဘူး” လို့ ပြောကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။
34. မျက်လုံးတဝိုက်က အရေးအကြောင်းတွေကို လျော့ပါးသက်သာစေမယ့် Eye Mask ၄ မျိုး	-Irrawaddy
#Health	(5d ago)
ဖြင့္ရန္။ ငှက်ပျောသီးဟာ ပိုတက်ဆီယမ်၊ ပရိုတင်းနဲ့ အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အသီးအနှံတမျိုးဖြစ်တာကြောင့် မျက်နှာ အသားအရေကို အားဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့အပြင် အရေးအကြောင်းတွေကို လျော့ပါးစေနိုင်ပါတယ်။
33. ပြတ်သွားတဲ့ ရည်းစားဟောင်းကို ခပ်ချေချေ နေပြနိုင်မယ့် နည်းလမ်း ၅ ခု	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ အားရင် လူကအလိုလို အတွေးချော်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ကိုယ်သင် အနားမပေးပါနဲ့။ သင်တန်းတွေတက်ပါ။ အလှတွေပြင်ပါ။ အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ပါ။
32. Nick နဲ့ Priyanka ကို အောင်သွယ်ပေးခဲ့တယ်လို့ အရွှန်းဖောက်ပြောတဲ့ Dwayne Johnson	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ မင်းသားက “ဟုတ်ပါတယ်။ ကျနော် အောင်သွယ်ပေးခဲ့တာပါ။ သူတို့ပျော်နေတယ်ဆိုရင် ကျနော်က Baywatch နဲ့ Jumanji ကို ညွှန်းဆိုပြရမှာဖြစ်ပါတယ်” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
31. Police Dismantle Settlement Built on Razed Rohingya Village	-Irrawaddy
#Burma	(6d ago)
ဖြင့္ရန္။ Surprise action follows detention of three Arakan activists
30. New Delhi Denies Indian Media Reports of Border Encroachment by Myanmar	-Irrawaddy
ဖြင့္ရန္။ India’s External Affairs Ministry calls allegations that boundary posts were shifted ‘baseless’
29. ငြိမ်းချမ်းရေးတွင် အလျှော့အတင်း ပြုလုပ်လိုသည့် စိတ်ဆန္ဒ အထူးအရေးကြီးဟု ဆို	-Irrawaddy
#Politics	(6d ago)
28. ဆယ်ကျော်သက်တဦးရဲ့ ဆီးအိမ်ထဲ ဖုန်းအားသွင်းကြိုး ဝင်သွားမှုကြောင့် ခွဲစိတ်ထုတ်ပယ်ခဲ့ရ	-Irrawaddy
#IT	(6d ago)
ဖြင့္ရန္။ မိဘတွေဟာ အခုအဖြစ်အပျက်ကို သိသိချင်း သားဖြစ်သူကို တရုတ်နိုင်ငံ၊ အရှေ့မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်က Linkcou ကောင်တီက ဒေသတွင်း ဆေးရုံတရုံကို ပို့ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။